Waad salaaman tihiin asxaabta. | Professor Poeta
Waad salaaman tihiin asxaabta.
COVID-19, inkaartaas habaarka badan, dhuumaaleysiga ah, qatarta ah iyo dilaaga ah, waxay u baahan tahay, badbaadinteenna oo na qabsan, in aan ku nagaanno gudaha guryaheenna inta aan kari karno oo aan ka tagno oo keliya marka aysan jirin fursado kale. Kaliya xaaladaha lagama maarmaanka ah, xaaladaha daran. Iyo in markaan sameyno, aan ku sameyno dhammaan daryeelka loo baahan yahay si loo hubiyo amnigeenna, sida ku cad tilmaamaha Xubnaha Caafimaadka, sida isticmaalka maaskaro, nadaafadda gacmaha, ku dhaqidda cuntada ka hor iyo ka dib saabuun ama saabuun Ficilku waa inuu ku lug yeeshaa faraha, calaacalaha iyo dhabarka gacmaha ilaa curcurada. Samee isla nidaamka kahor iyo kadib isticmaalka gaadiidka dadweynaha iyo wiishashka iyo markaan xiriir jir ahaaneed la leenahay dadka ama waxyaabaha, bannaanka guryaheena. Haddii aadan haysan musqul, qaadashada aalkolo ayaa had iyo jeer kuu sahlaysa. Markaad qufacayso iyo markaad hindhisayso, isticmaal unugyo si aad uga ilaaliso dheecaanka inay ku baabi’iyaan hawada.Sidoo kale, iska ilaali gacan qaadka iyo amaan wajiga Ka fogow taabashada indhahaaga, sankaaga iyo afkaaga iyadoo aan gacmahaagu nadiif ahayn.
Waan ogahay inaysan sahlaneyn haba yaraatee, gaar ahaan kuwa sida aniga oo kale ah, ee qeyb ka ah waxa loogu yeero “Kooxaha Halista”, ee ku nool howlgabnimada guriga, fuliya go’doominta bulshada, kana fog dadka yaqaan, asxaabta iyo qaraabada. Sikastaba, ka fog kuwa aan jeclaan laheyn inaan wada joogno. Waxa ugu fiican, markaa, waa inaan nafteena ku dadaalno, wax soo saarno iyo inaan ilaashanno caafimaadkeenna jireed iyo maskaxeed. Si aynaan u quusan oo / ama aynaan u waalan. Waan aqriyaa, qoraa, daawadaa TV-ga, dhageystaa muusikada, galaangal u lahaadaa shabakadaha bulshada, wac, sida qof walba ay tahay inuu sameeyo. Laakiin waxaan rabaa inaan waxbadan sameeyo. Anna waan isku dayaa. Waxaan kuugu deeqayaa shirkadayda websaydhadayda iyo buugaagtayda, oo laga heli karo:
Buugaagta TRAVESSIA, DELAS, DELES iyo OPERAÇÃO MUTUM, oo leh noocyo Ingiriisi ah CROSSIN, FROM THEM, THEIR iyo OPERATION MUTUM, oo ay daabacday oo ay qaybisay shirkadda Amazon, ayaa lagu heli karaa buugga elektarooniga ah iyo noocyada Hardcover, si loogu iibsado ama loogu akhriyo bilaash Kindle aan xad lahayn:
Waxaan uga tegayaa isku duubnaanshaha walaaltinimo iyo kalgacayl midkasta oo idinka mid ah, anigoo ku weydiinaya, qaali, inaad sii wado taxaddarka. Xayawaankaas DIL!